Faarax Macalin oo dowladda u sheegay qorshe ay ku xalin karto werarada ey dalalka shisheeye ka danbeyaan - Xigasho.net | Xigasho.net
Faarax Macalin oo dowladda u sheegay qorshe ay ku xalin karto werarada ey dalalka shisheeye ka danbeyaan
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Baarlamaanka Dalka Kenya Faarax Macallin sidoo kalena ka tirsan madaxda Isbaheysiga Mucaaridka ah ee NASA ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay dalka ka saarto Diblomaasiyiinta iyo danaha Imaaraadka.
Faarax Macallin ayaa sheegay Twitter-kiisa ku qoray ” Farmaajo iyo Kheyre,ka saara Imaaraadka Muqdisho,Ilaahay dartiis,xira safaaraddooda,saldhigyadooda Milatari ee Muqdisho,haddii sirdoonkiinnu hayo caddeymo ku filan in Imaaraadka Somaliya ka wado argagixisannimo,arrintan la taga Qaramada Midoobey,ha sugina ilaa ay Soomaaliya ka dumiyaan”.
Faarax waxaa uu ka mid yahay Siyaasiyiinta aad u dhaliila Waddada Safka hore ee ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya waxaana uu dhowr jeer sheegay in Waddamada deriska ay diiddanyihiin dowladnimada Soomaaliya.
Weerarkii shalay ee lagu qaaday Guriga Cabdi Qeybdiid ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen Ciidamo uu tababaray Imaaraadka oo sugan Muqdisho.
Kuwaas oo hadda Taliska Milatariga Soomalaiya ay sheegeen in 40 ka mid ahaa iyo saraakiishoodaba ay xabsiga dhigeen.